सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कसले के भने ? « Naya Page
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कसले के भने ?
प्रकाशित मिति : July 13, 2021
काठमाडौं, २९ असार ।
फैसला जनभावनानुसार : सभामुख सभामुख
अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फैसला ऐतिहासिक छ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला आएको छ । जनभावनाको कदर भएको छ ।’
ऐतिहासिक फैसला : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागतयोग्य कदम भनेका हुन् ।
फैसला त्रुटिपूर्ण तर स्वीकार गर्ने : एमाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फैसला गरेपछि बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
महत्वपूर्ण परिघटना : दाहाल
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई इतिहासमै एक महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिएका छन् । उनले अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् ।
फैसला स्वागतयोग्य : जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई अदालतले फेरि एक पटक रोकेको जनाउँदै जसपाले फैसलाको स्वागत गरेको हो । राजधानी दैनिकबाट
ओलीले बनाए १८ पदाधिकारीको सूची, को–को नेतालाई गरियो समावेश ?
वायु प्रदूषण बढ्दै, स्वास्थ्यमा चुनौती
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ६ महिनासम्म एउटै मुद्दा पनि दायर गर्न सकेन
एक घण्टा पछि सर्‍यो एमाले बन्द सत्र
काठमाडौं, १२ मंसिर । नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनको तेस्रो दिन आइतबार बन्दसत्र सुरु हुन सकेको
बन्द सत्र रोकेर ओलीले ‘धाँधली’ गर्न खोजेको भीम रावलको आरोप
चितवन, १२ मंसिर । एमालेको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका भीम रावलले
सर्लाहीमा कांग्रेस वडा अधिवेशनमा मन्त्रीका अङ्गरक्षकले चलाए गोली
सर्लाही, १२ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज (आइतबार) देखि सर्लाहीमा शुरु
२०७८ मंसिर १२ गते आइतबारको तपाईको राशिफल
२०७८ मंसिर ११ गते शनिबारको तपाईको राशिफल
‘म्यान अफ इलेक्सन’ जसले एमालेलाई मुलप्रवाह बनाए, आफू चहिँ किनारामा परिरहे
नारायणी किनारमा घनश्याम भुसालका दुःख र खुसी
२०७८ मंसिर १० गते शुक्रबारको तपाईको राशिफल
२०७८ मंसिर ९ गते बिहीबारको तपाईको राशिफल
२०७८ मंसिर ८ गते बुधबारको तपाईको राशिफल
२०७८ मंसिर ७ गते मंगलबारको तपाईको राशिफल
२०७८ मंसिर ६ गते सोमबारको तपाईको राशिफल